10 Xayeysiisyo Wanaagsan oo Lagu Sameeyay Cargocollective iyo 4 Casuumad Bilaash ah | Abuurista khadka tooska ah
Lua louro | | Design Graphic, Dhiirrigelinta
Markii aan samaynayno faylalka internetka waxaan haynaa dhulal badan. Kee la dooranayaa? Taladaydu waxay tahay inaad tijaabiso dhammaantood, iskaga mashquusho oo aad hayso kan aad ugu jeceshahay: si loogu fududaado qaabeynta, tusaalooyinka la heli karo, sida ugu fudud ee loo cusbooneysiin karo ...
Mid ka mid ah dhufto ee ugu fiican in tan la sameeyo waa Kaargocollective. Haddii aad waligaa rabto inaad gasho, waxaad ogaan doontaa in casuumaad loo baahan yahay si loogu abuuro faylalkaaga halkaas. Hagaag nasiib baad ku jirtaa! Waxaan go aansaday inaan ku siiyo afarta martiqaad ee aan ugu tagay afarta akhris ee ugu horreeya qoraalkan.
Naqshad wanaagsan, sawir qaadasho iyo sawir-qaadasho
Erayada sixirka ee faylalka tacliimeed ee wanaagsan: sahlanaan fudud, macluumaad cad oo kooban iyo xulashada shaqooyinka ugu fiican. Waxaan inta badan dooneynaa inaan sameyno faylalka tacliinta sare leh oo muuqda, taasi waa wax ugub ku ah naqshadeynta ... Laakiin waxaan ilaawnaa in waxa ugu muhiimsan ay yihiin waxa ku jira. Haddii aadan ahayn barnaamij mashiin, naqshadaynta iyo horumarinta, laga yaabee ikhtiyaarkaaga ugufiican inuu yahay madal abuurka faylalka.
Halkan waxaa ah liis ay ku qoran yihiin 10 shaqooyin wanaagsan oo lagu sameeyay Cargocollective oo ku dhiirrigelin kara kuna tusi kara waxaad qaban karto.
Sida for casuumaadahaKaliya hal URL hal qof. Sidaa darteed, haddii aad gujiso xiriiriyaha oo uusan kuu shaqeynin, waxay ka dhigan tahay in qof kaa dheereeyay, marka waxaan kugula talinayaa inaad dib ugu laabato boostada oo aad isku daydo cinwaan kale. Markaad isticmaasho, waxaan kaa codsanayaa inaad ka tagto faallooyin sidaas sheegaya si aad u xirto boostada una ogeysiso in casuumaadaha la daalay.
Mariana garcia: Naqshadeeye sawir gacmeed tababar, sawir qaade reer Mexico ah xirfad ahaan. Waxaan wajahaynaa faylal nadiif ah, oo leh astaan ​​aad u kala duwan oo ku taal madaxa. The hal qayb guud jagooyinka kale, "ku saabsan". Kadib wuxuu isku xiraa majaladda uu iskaashi la leeyahay, Tumblrkiisa iyo boggiisa (dhammaantood waa xiriiriyeyaal dibadeed). Waxyaalaha lagu marti galiyay xamuulka alaabada waxaa loo kala saaray "sheekooyin", "ololeyaal", "sawirro" iyo "dad aan aheyn", hab lagu abaabulo shaqadaada. Sidaad arki karto, domain .org ah ayaa la iibsaday
Atelier Dyakova- Nashqadeeyaha farshaxanka ee London iyo agaasimaha farshaxanka. Marka hore, taasi way igu dhacday menu badhanka waxaa loo dhigaa tiir dhinaca midig ee shaashadda. Macluumaadka waxaa laga heli karaa bogga ugu weyn sida blog, laakiin haddii aan gujino qaybaha menu-ka waxaan aadi doonnaa waxyaabo gaar ah (macluumaad ku saabsan, abaalmarinta, daabacaadda, warsaxaafadeedyada ...). Ma jecli qoraalka qoraalka, sidoo kale ma jecli xiriiriyeyaasha soo socda (10) ee ku sifooba Cargocollective. Intaas waxaa sii dheer, qoraagu ma daryeelin favicon-ka degelkiisa, oo la mid ah tan barxadda.
Mike heshiis: naqshadeeye garaaf iyo horumariye webka. Mawduucu waa waxa muhiimka ah: iyada oo aan la kala jeedin, sawirada u dhiganta mashruuc kasta waxaa lagu habeeyay shaashadda. Waxaad kaliya baari kartaa qaybta "About", Kaliya shabakadda oo dhan, oo lagu agdhoobay cinwaanka cinwaankaaga.
Glory Marigo: sawir qaade. Faylka faylka ee ku yaal dhinaca ka soo horjeedka kii hore dartiis qaybo badan (midwalba wuxuu u dhigmaa cinwaanka mashruuc). Haddii aan rogrogo waxaan kaliya dhex wareejin doonnaa qaybta dhexe ee webka, innaga oo ka tegaya dhinaca bidix ee had iyo jeer go'an. Xaaladdayda, maadaama aan haysto shaashadda 13 ”waa wax aan raaxo lahayn maxaa yeelay qaybaha waa la jaray oo ma wada arki karo dhammaantood (had iyo jeer xusuusnow muhiimadda ay leedahay xilalka inay jawaabaan).
Basbaas & Qorfe- Istuudiyaha calaamadaha yaryar oo ku yaal Singapore. Astaanta hoostagta taajkeeda faylalka waxaa ka hooseeya cinwaan mashruuc kasta, marka lagu daro qaybta ku saabsan. Hoos waxaa ku yaal liiska noocan ah sawirrada u dhigma mashruuc kasta. Haddii aad riixdid iyaga ama liiska, waxaad aadi doontaa sharaxaadda faahfaahsan ee shaqo kasta.
Sean McClintock: Motion naqshadeeye naqshadeeye iyo sawirqaade ka socda New York. Halkii uu dhigi lahaa qaybaha faylalka uu ka kooban yahay (oo ah laba, "Ku saabsan" iyo "Blog") wuxuu abuuray laba sawir oo raac astaanta qaab ahaan iyo midab ahaanba, si aanu isugu dhicin. Haddii aan si qumman u rogno waxaan arki karnaa dhammaan sawirrada u dhigma shaqadooda.
Simon Alibert: Layaab sida ay umuuqato, websaydhka ma heli doonno astaan. Ma ahan madax, sida oo kale. Kaliya menu menu ah oo ka kooban qoraal ballaaran oo ka kooban laba qaybood, kuwaas oo kala sooca shaqada sawir qaadista, iyo saddexaad oo loo yaqaan "About". Tani waa meesha kaliya ee aan ka heli doonno magaca Simon Alibert, marka lagu daro bogga: naqshadeeye UX iyo sawir qaade hiwaayadeed.
Merijn Hos: sawirqaade iyo farshaxan muuqaal ah. Faylalfooliyo leh mashaariic badan. Waxay igu dhufatay in magaca iyo qeybaha aysan ku kala duwaneyn cabir ahaan, midab ahaan, meelayntooda ...
Mauro gatti: sawir qaade. Wuxuu nagu soo dhaweynayaa a fariin wacan madaxa. Raadintu waxay aad ugu egtahay faylalka hore.
iamalwayshunkii: Istuudiyaha hal abuurka leh oo ku yaal New Orleans. Taariikh madow soo dhaweyn ahaan, muhiimadda sawirka ayaa talinaysa. Si aan ugu dhex wareegno sawirrada mashruuc kasta waa inaan u adeegsannaa fallaadhaha kumbuyuutarkayaga.
Casuumadaha bilaashka ah ee Kaargocollective:
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » 10 xayeysiisyo wanaagsan oo laga sameeyay Cargocollective iyo 4 casuumaadyo bilaash ah
Aad baad u mahadsantahay, ka tagida casuumaadahu waa tafaasiil maqaalkuna runtii waa dhiiro galin.
Ku jawaab mariaagua
Waad ku mahadsan tahay marriaagua, waxaan ku faraxsanahay in boostada ay kugu dhiirigelisay. Haddii aad isticmaasho casuumaad, xusuusnow inaad ku dhahdo halkan, si aad "iskutallaabta" (casuumaad kasta loogu talagalay hal adeeg)
okay! Waxaan isticmaalay lambar 3
Perrfect, xiriiriye gudbay. Waxaan rajeynaynaa inaad la jaanqaadi karto shirkadda Cargocollective! ;)
Waxaan u maleynayaa inaadan wax martiqaad ah ka harin, sax?
Ku jawaab Fito
Fito, ma isku dayday 3da casuumaad ee aan lagaranayn? Mabda 'ahaan waa inay diyaar yihiin.
Iyagu ma shaqeeyaan. Qof baa ilaaway inuu kuu mahadceliyo… Waan ku mahad naqayaa si kastaba ha ahaatee!
Waxaan sii wadi doonnaa akhrinta fursadda xigta.
Waxaan kuugu hambalyeynayaa barta, wax badan baa soo hagaagay tan iyo maalmihii ugu horreeyey ee aan kugu akhriyay!
Hagaag, maxaa ceeb ah ... Waqtigan xaadirka ah martiqaad dambe ma haysto. Haddii aan helo wax, waxaan ballanqaadayaa inaan wax ka beddelo qoraalka oo aan ku wargeliyo faallo.
Mahadsanid! Waxaan nahay dhowr si aan wax uqorno waana ku faraxsanahay inaan aqrino waxyaabahan.
Ku farax magaalada Beijing;)
Marcos gonzalez dijo
Ma jiraa qof igu martiqaadaya shixnadaha shixnadaha, aad baad u mahadsan tahay
Ku jawaab marcos gonzalez
Waad salaaman tahay xirfad wanaagsan, ma ii soo diri kartaa casuumaad xamuulka xamuulka? Aad baad u mahadsantahay